Ungayithola kanjani i-PR9 yokulandela emuva ngemuva kwesikhathi esifushane?
Ukwenza ibhizinisi lakho libonakale ku-Google, udinga ukubeka isikhundla ku-1 noma okungenani ekhasini elibili lomphumela wosesho. Kunzima ukususa isayithi lakho kuze kube yi-TOP ye-Google SERP njengoba ukuncintisana kuwo wonke ama-market niches kuphezulu. Izici ezimbili eziphawulekayo ezingenza ibhizinisi lakho le-intanethi liphumelele ukuthuthukisa injini yokusesha nokukhangisa kokuqukethwe. Ngenkathi ukukhokha ngezikhangiso ngokuchofoza kungabonakala kubi kakhulu kwamanye amabhizinisi, ukusebenza kwe-injini yokusesha kungenziwa ngezindleko ezincane. Kodwa-ke, kufanelekile ukuphawula ukuthi udinga ukwazi zonke izici zokusebenza kanye nemibono kanye nemingcingo namasu wokudala umkhankaso wokwenza ngcono. Ngenhlanhla, kunezibhulogi eziningi ze-SEO ezinjengalezi, oklanyelwe ngokukhethekile ukwenza ubukhona bakho bezenhlalakahle bunamandla.
Lesi sihloko sizinikezelwe esihlokweni sokwakha i-PR9 esilandelayo emuva. Uzofunda ukuthi i-backlink eyigugu kangakanani ebhizinisini lakho nokuthi yimiphi imithombo yewebhu ehloniphekile namapulatifomu omphakathi ongawasebenzisa ukwakha izixhumanisi ezihambelana kakhulu nezinga eliphezulu kwisayithi lakho.
Kungani udinga ukwakha i-backlink engenzelwe kwimithombo ye-PR9 yewebhu?
Ukuxhumana nabantu abaningi okufana ne-Facebook, Twitter, ne-LinkedIn banekhasi eliphakeme le-PageRank elihle ohlwini lwakho lokuhlola lwe-SEO. La mapulatifomu yizindawo ezingcono kakhulu lapho kushiwo khona isayithi lakho. Ukudala ama-backlink kubhulogi yakho kusuka emithonjeni yewebhu ye-PR9 cishe izophazamisa kahle indawo yakho yokubeka isayithi ku-Google. Yingakho kungumqondo ohlakaniphile ukusebenzisa izinhla zabo eziphezulu ngenzuzo yakho ngokubheka emuva kubhulogi yakho kubo. Uma konke kwenziwa kahle, uzothola igunya elengeziwe kusuka kuzinjini zokusesha nezinga eliphakeme.
Kunezinhlobo ezimbili ze-backlink ongayithola kusuka kumawebhusayithi aphezulu we-PR - yenza okulandelayo futhi ungalandeli. Ukulandela emuva kwe-backlink kunenani elikhulu kumasayithi akho njengoba badlulisa ijusi lokuxhumanisa. Izinjini zosesho ziphawula izibonakaliso ezivela emithonjeni egunyaziwe nge-backlink bese unikeza isayithi lakho isikhundla esiphezulu. Ukuxhumana ne-"nofollow" ithegi akukwazi ukuphawulwa ngamabhoki wokusesha futhi kulethe inani eliphakeme ekuthuthukiseni isikhundla sakho sesayithi. Ku-HTML, yenza okulandelayo ikhodi ezenzakalelayo yezixhumanisi. Kudinga ukungeza lutho olukhethekile kumawebhusayithi we-URL. Ngokuphambene nalokho, akukho okulandelayo emuva kokulinda kudinga umyalo othize obonisa ukuthi ukuxhumanisa akufanele kubalwe kusigaba.
Indlela yokuthola i-PR9 elandela ukulandelana kwe-backlink?
Indlela elula yokudala ama-backlink aphezulu e-PR ukwenza imibono noma ukudala ikhasi lephrofayela. Kodwa okokuqala, udinga ukwenza ucwaningo futhi ubheke izibalo zesimo semithombo ye-nethi ehlobene newebhu futhi ucabange ukuthi hlobo luni lomgwaqo abazoyiletha kusayithi lakho.
Ake sibheke enye yezintandokazi zokuxhumana eziphezulu ze-PR ezithandwa kakhulu ezizoletha ijusi lokuxhumanisa eliphezulu kwisayithi lakho.
Udinga ukwakha ikhasi lakho lebhizinisi ku-Facebook, bese uya ku- "Engeza isixhumanisi se-HTML esiya ekhasini" bese ushiya i-URL yakho ye-URL esemthethweni lapha. Khona-ke udinga ukuthola inkinobho ethi "Hlela" bese ususa ifayela, inkomba. i-html. Kulesi sigaba udinga ukufaka isixhumanisi somthombo wewebhu kuwefomethi elandelayo: Igama lakho lebhulogi . Ukuqedela inqubo yokudala i-backfink ye-dofollow ku-Facebook, udinga ukuchofoza inkinobho ethi "Gcina nokushicilela".
Ukudala ukulandelana kwe-backlink ku-LinkedIn kufana ne-Facebook. Udinga ukwakha i-akhawunti yakho yebhizinisi futhi esigabeni esithi "Ulwazi lomuntu siqu" kufaka phakathi i-backlink yakho ehlala njalo. Ezinye izixhumanisi ongazakha kule platform ngeke zilandelwe Source .